Maxaa Ruushka looga mamnuucay ka qeyb galka cayaaraha ugu waa weyn dunida? | Xaysimo
Home War Maxaa Ruushka looga mamnuucay ka qeyb galka cayaaraha ugu waa weyn dunida?
Maxaa Ruushka looga mamnuucay ka qeyb galka cayaaraha ugu waa weyn dunida?
Dalka Ruushka ayaa laga mamnuucay ka qeyb qaadashada dhacdooyinka ugu waa weyn cayaaraha adduunka muddo afar sannadood ah ka dib markii ay ka been sheegeen baarista isticmaalka dawooyinka laga mamnuucay ciyaartoyda.
Hay’ada La socodka Dawooyinka La mamnuucay ayaa xaqiijisay ciqaabta ku dhacday Ruushka ka dib markii ay soo jeediyeen guddi madax banaan oo baarayay arrintaasi.
Go’aanka la gaaray ayaa waxa uu Ruushka ka mamnuucayaa inuu ka qeyb qaato ciyaaraha Olimbikada ee sannadka soo socda ka dhacaya Tokyo, ciyaaraha Olimbikada Jiilaalka ee 2022 ka dhacaya Beijing iyo Koobka Adduunka ee Qatar lagu qabanayo sannadka 2022.
Ciyaartoyda Ruusha ee aan isticmaalin dawooyinka la mamnuucay ayaa loo ogolaan doonaa inay ka qeyb qaataan ciyaaraha Olimbikada balse waxay hugan doonaan calan dhexdhexaad ah oo ma matali karaan dalkooda Ruushka.
Balse Ruushka ayaa xor u ah inay ka qeyb qaataan Euro 2020 madaama koobkaasi ay soo qaban qaabiso xiriirka kubada cagta Yurub ee UEFA.
Inkastoo tartanka Qaramada Yurub uu ka mid yahay ah tartamada ugu waa weyn isboortiga hadana xiriirka kubada cagta Yurub ee UEFA looma arko inuu yahay urur weyn oo isboorti ah iyadoo FIFA ay booskaas u taagan tahay sidaasi darteed sharciga caalamiga ah iyaga ma qabto.
Waana sababta Ruushka looga mamnuucay kaliya dhacdooyinka ugu waa weyn ee isboortiga adduunka oo ay soo qaban qaabiyaan hay’adaha ugu waa weyn cayaaraha sida guddiga Olimbikada iyo FIFA.